တရုတ်နိုင်ငံက အသင့်အတင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ရရှိခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုနေကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းတွင် ဖော်ပြ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း တိဗက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Qamdo မြို့၊ Dengqen ကောင်တီရှိ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနေရာ၌ အဆောက်အအုံများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တရုတ်နိုင်ငံသည် လူတန်းစားအားလုံးတွင် အသင့်အတင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရရှိခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုလျက်ရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ပြန်ကြားရေးရုံးမှ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်၌ ထုတ်ပြန်သည့် စက္ကူဖြူစာတမ်း၌ ဖော်ပြထားသည်။
လူတန်းစားအားလုံးတွင် အသင့်အတင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ရရှိခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပိုမိုသာယာဝပြောလာခဲ့ပြီး ပိုမိုပျော်ရွှင်သော ပြည်သူများ၊ ပို၍တည်ငြိမ်မှုရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း “ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆီသို့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မှတ်တမ်းတင်ထိုက်သောခရီး” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော စက္ကူဖြူစာတမ်း၌ ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှကူညီထောက်ပံ့မှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကို အကြီးမားဆုံး ထောက်ပံ့ပေးသူအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိကြောင်း ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၏ အဓိက ထောက်တိုင်နှင့် မောင်းနှင်ပေးသူလည်း ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း စာတမ်းက ဆိုသည်။
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းနိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကိုလည် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး တိုးချဲ့နိုင်ခြင်းများ၌ ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးပြန်လည်နာလန်ထူရေး ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် တွန်းအားသစ် ဖြည့်တင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို ကျွေးမွေးခြင်း နှင့် ကမ္ဘာ၏ ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးမြေ၏ ၉ ရာခိုင်နှုန်းမျှဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော လယ်ယာထွက်ကုန်များအတွက် ၎င်းတို့၏ အမျိုးမျိုးသောတောင်းဆိုချက်အား စိတ်ကျေနပ်စေခြင်းတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်း စက္ကူဖြူစာတမ်းအရ သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Sept. 28 (Xinhua) — As the world’s most populous and largest developing country, China has contributed to global peace and development by achieving moderate prosperity in all respects, saidawhite paper released Tuesday by China’s State Council Information Office.
Achieving moderate prosperity in all respects has made China more prosperous, the people happier, and society more stable, said the white paper titled “China’s Epic Journey from Poverty to Prosperity.”
China succeeds in feeding almost 20 percent of world population and satisfying their diverse demands for high-quality agricultural products with only9percent of the planet’s arable land, according to the white paper. ■
Aerial photo taken on Sept. 18, 2020 shows the buildings ofaresettlement site at Dengqen County in Qamdo City, southwest China’s Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Zhan Yan)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် လူ ၆ ဦး သေဆုံး ၊ ၂ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ